(Dhagayso) Dood ku saabsan Nooca Saamaynta Qurba-joogta Reer Puntland – Radio Daljir
(Dhagayso) Dood ku saabsan Nooca Saamaynta Qurba-joogta Reer Puntland
Janaayo 4, 2016 6:40 g 0
Waxaa doodaan marti galiyay wariye Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin, waxaana lagu falanqaynayaa 3 su’aalood oo kale ah:
1- Intee ayay le’eg tahay Saamaynta ay Qurba Joogta reer Puntland ay ku leeyihiin deegaannada Puntland?
2- Xiriir maka dhaxeeyaa kororka Da’yarta Tahariibaysa, iyo Qulqulka Qurba joogta dalka kusoo laabanaysa ?
3 – Dowladda Puntland jihayn iyo qorshe ma u samaysay Qurba Joogta reer Puntland ?
Dooda waxaa ku marti ah labo aqoonyahan oo oo kale ah Rooble Axmed Daahir iyo Maxamed Shire Cabdi (Haariye) Daljoog iyo Dibad-joog kala taageersan.
(Dhagayso) Siyaasi Maxamed Cabdinuur Xirsi oo xaaraan ku tilmaamay qorshaha isla-xisaabtanka xukuumadda Puntland
Jubbaland oo ka hadashay Imaanshaha Ciidamada Itoobiya ee Kismaayo